कोरोनाको असर र हाम्रो भविष्य
२०७६ चैत २४ सोमबार, कोरोना युगलाई १९३०को आर्थिक मन्दीको कालभन्दा भन्दा पनि संकट र खतराको रूपमा हेरिएको छ। बिश्वभरिबाट करोडौं रोजगार गुम्ने प्रस्ट देखिसकिएको छ। अहिलेको कोरोना भाईंरसको असरले महाशक्तिसाली राष्ट्र र बिश्व समुदायलाई ठूलो शिक्षा र चुनौती समेत दिएको छ। ... बाँकी अंश»
कोरोना महामारीमा स्लोभाकीयाको अनुभव
२०७६ चैत २४ सोमबार, स्लोभाकीयाको पर्यटकीय स्थल बोयनीचे अस्पतालमा हालसम्मको एकमात्र कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । जम्मा संक्रमित मध्ये १० जना संक्रमण मूक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भैसकेका छन् र हाल उपचाररत ४७४ जना मध्य ३ जना मात्र क्रिटिकल अवस्थामा भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । ... बाँकी अंश»
कोरोना विरुद्धको महायुद्धमा नायक र नायकत्वको खोजी
२०७६ चैत २४ सोमबार, चैत्र २३ लकडाउनको तेह्रौ दिन थियो । यो दिन देशमा हुनै नहुने केही गम्भीर प्रकृतिका कुरा भए जसले लकडाउनमा घरभित्र बसेका नागरिकलाई अचम्मित र चिन्तित तुल्यायो । ... बाँकी अंश»
जीव, प्रकृति र मान्छेको विवेकको परिक्षण
२०७६ चैत २३ आइतबार, लगभग साँढे चार अरब बर्षदेखि पृथ्वी अस्तित्वमा आयो । मह जस्तो लेदोबाट बिकसित हुँदै आज हामीले देखेको रुपमा आइपुग्दा पृथ्वीले धेरै कुरा जन्मायो र धेरै कुरा लोप भएर पनि गए । प्राणी, बनस्पतिदेखि बातावरण पनि परिवर्तित भएको अनुभव हामीले पनि छोटो समयमा नै गरिरहेका छौ भने यो चार अर्ब बर्षमा यसले के पायो होला के गुमायो होला हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हुन पुग्छ । ... बाँकी अंश»
नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष राजनेता गिरिजाबाबु पुस्तकमाथि लकडाउन संवाद
२०७६ चैत २२ शनिबार, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नम्वर ५ बाट राजनीति गर्दै आएका रामचन्द्र घिमिरे लकडाउनमा घरभित्रै अध्ययन र घरायसी काममा व्यस्त रहेको बताउँछन्। पत्रकार समेत रहेका घिमिरेसँग हामीले लकडाउन संवादमा रहेर नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष राजनेता गिरिजाबाबुको बारेमा चर्चा गरेका छौ। ... बाँकी अंश»
‘कोभिड १९’– चीनबाट के सिक्ने ? प्रा. डा. राजिव झाको अनुभव
२०७६ चैत २२ शनिबार, काठमाडौं। शुक्रबार अपराह्न भैँसेपाटीस्थित निवास पुग्दा उनले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधि, प्राध्यापक र चिकित्सकहरुबाट बधाई ग्रहण गरिरहेका थिए। उनको वीच्याट अकाउन्टमा निरन्तर फोनको घन्टी बजिरहेपछि हामीले केहीबेर कुर्यौँ। उनले कोरोनाकै विषयमा अनुसन्धान गर्न चीनको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट ८ लाख आरएमबी (चिनियाँ पैसा) अनुदान पाएका रहेछन। एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ हुने सो रकम प्राप्त गरेको खबर भर्खरै चिनियाँ साथीहरुबाट पाएका प्राडा.झा पनि खुसी देखिन्थे। ... बाँकी अंश»
२०७६ चैत २२ शनिबार, प्रिय नेपाल आमा तिम्रो तस्बिर छातिमा टाँसेर सम्झँदै म परदेशी छोराको तर्फबाट शिर निहुँराएर ढोग छ। कहाँ बाट सुरु गरौं मेरा भाबनाहरु नेपाल आमा, म र म जस्ता हजारौं नेपाली बन्द कोठामा सिमित रहेको ३ हप्ता भन्दा बढी भइसक्यो। हरपल हरदिन आफ्नो माटो अनि मातृभुमिलाई सम्झेर रुनु सिवाय परदेशीको के नै हुन्छ र ? अझै कति दिन बन्द कोठामा उकुसमुकुस भएर समय कटाउने हो अन्यौल छ। ... बाँकी अंश»
कोरोना भाइरस निको पार्न डाक्टरको सल्लाहसँगै उपयोगी हुन्छ नामजप
२०७६ चैत २१ शुक्रबार, काठमाडौं। स्पिरिच्युअल साइन्स रिसर्च फाउण्डेशन (एसएसआर)ले शारीरिक र मानसिक रोगहरुको लागि आध्यात्मिक उपचारको साथसाथै पारम्पतिक चिकित्सा उपचारलाई निरन्तरता दिन सल्लाह दिएको छ। ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न, 'नागरिक जोगाउने कि स्वास्थ्यमन्त्री ?'
२०७६ चैत २१ शुक्रबार, विश्व जगत नै कोरोना भाइरसको महासंकटसँग गुज्रिरहेको बेला सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीमा ठुलो आर्थिक घोटाला भएको सार्वजनकि भइसकेको छ। विषम परिस्थितिमा मृत्युसँग जुध्न खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कमिसनको चक्करमा लाग्ने मन्त्रीहरुदेखी नागरिक तप्का पुरै विक्षिप्त छ। ति सामाग्रीहरुको खरिदमा करोडौं घोटाला भएको तथ्य फेला पर्दा समेत सरकार कोविड १९ बाट आमनागरिकलाई जोगाउने भन्दा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मन्त्री पद जोगाउन रातदिन नभनी लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखी सिंगो पार्टी पङ्ती नै यसमा पार्टीको साख नै दाउमा राखेर भिडेको छ। ... बाँकी अंश»
अमानवहरुलाई बालुवाटारले पोस्ने, धुम्बाराही र पेरिसडाँडाले कतिन्जेल स्याहार्ने ?
२०७६ चैत २१ शुक्रबार, सारा विश्वका मानवजाति आफन्तहरु शवलाई दाहसंस्कार गर्न मलामी नपाएका वखत धन कुम्ल्याउनेलाई मानव जाति भन्न सकिदैन। तपाईंहरुलाई पनि यस्तै लागेको होला मेरो विश्वास छ। म निवेदन गर्दछु यस्ता अमानवहरुलाई बालुवाटारमा पोसेर तथा धुम्वाराही तथा पेरिस डाँडाले स्याहारेर राख्दा समाजवादको बाटो होइन पार्टी नै आर्यघाटतर्फ लाग्छ। ... बाँकी अंश»
चीन र डब्लुएचओको झुठ, जसले कोरोना भाइरसबारे बोल्न ढिला गरे
२०७६ चैत २१ शुक्रबार, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बारेमा चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले गरेको ढिलाईप्रति गम्भीर टिप्पणी हुन थालेको छ । ... बाँकी अंश»
मानिसले अर्काको निन्दा र स्तुतिबाट पर बस्नु नै उत्तम
२०७६ चैत २० बिहिबार, काठमाडौं । भिष्मपितामह र युधिष्ठिरका वीचमा धर्म, अधर्म लगायतका विभिन्न विषयमा चर्चा चल्दै थियो । युधिष्ठिरले गरेका प्रश्नका उत्तर पितामहले दिदै थिए । एकपटक युधिष्ठिरले के गर्नाले मनुष्यको कल्याण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
लकडाउनको पहिलो दिन, आँखाले उनैलाई खोजिरह्यो
२०७६ चैत २० बिहिबार, झल्यास्स बिउझिदा पनि दोलखा जाने हो भन्ने भान भएको थियो, साथीहरुसँग घर जाने कुरा जो हिजो अस्तीदेखि भईरहेको थियो । बिउझिदा म सोहि फ्ल्यासब्याकमा पुगेको रहेछु । आखाँ खुल्दै गए तर म सपनामा हराउदै गए, कम्तिमा १ हप्ता त एक्लै बस्नु छ, कैदी जसरी, भित्र बस्दा अल्छी लाग्ने, बाहिर जाउ कोरोना र प्रहरी दुबैको डर । ... बाँकी अंश»
नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु अब मर्जमा जानुपर्छ
२०७६ चैत २० बिहिबार, डक सुनसान छ । पसलहरु बन्द छन । मानिसहरू एकान्तवासमा छन। सन्त्रासले जलिरहेको छ सबैको मुटु । हरेक सुर्यास्त सगै एक प्रकारको त्रास भित्रीन्छ दैलोबाट । बिहानीको घामसगै एक दिन बाच्न पाएकोमा भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्ने भएको छ । ग्यास सिद्दिदै छ । चामलको बोरा रित्तिदै छ । एक मुठी रायोको साग पचास रुपैयाँले पनि पाउन सकिन्न। हरियोपरियो नखाको धेरै दिन भो । गुन्द्रुकले पेटमा ग्यास बढाउन थाल्यो। दुध र फलफूल त धनीको घरमा पुगेका छन रातारात । धनीहरुलाइ कोरोनाको लकडाउनले केही असर गरेकै छैन। ग्यास भनेको पन्ध्र दिन भो । पसलेले पनि गरीबलाई नराम्ररी हेप्छन । गाउँ जान पनि सकिएको छैन। गाउँ जाउ भनेपनी बिच बाटो मै अलपत्र परिएला भन्ने त्रास।फेरि गाउँ जादा पनि गाउलेले कोरोन्टाइनमा बस्न लगाउछन। गाउँले पनि यतिबेला त्रासमै छन। ... बाँकी अंश»
निजी क्षेत्रलाई सहयोगको याचना गरिएको राहत प्याकेज विपन्नमुखी कि प्रचारमुखी ?
२०७६ चैत २० बिहिबार, सामान्य भन्दा सामान्य कामहरु पनि नहुँदा नागरिकमा निराशा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल उच्च राख्न सरकार अब्वल देखिएन । ... बाँकी अंश»
१० दिनको सुत्केरीलाई समेत सडकमै छोड्ने सरकारको संरक्षण नीति कसको लागि ?
२०७६ चैत १९ बुधबार, नेपाल सरकारको संरक्षण नीतिमा बालवालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बिशेष प्राथमिकतासाथ हेर्ने भन्ने सरकारको नीति छ, भनिएको छ। तर रुपन्देही जिल्ला तिलोतमा नगरपालिका मंगलापुर कान्छी बजारकी १० दिनकी सुत्केरी लक्ष्मी परियारलाई रुपन्देही जिल्लाको सुनौली नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिईएको छैन। ... बाँकी अंश»
पूर्वजन्ममा को थिए भीष्म पितामाह, किन जन्मनु पर्‍यो मनुष्य भएर ?
२०७६ चैत १९ बुधबार, श्रीमतीको कुरा मानेर द्यौले आफ्नो भाइहरुसँग सो गाईको हरण गरे । जब महर्षि वशिष्ठ आफ्नो आश्रममा आए तब उनले दिव्य दृष्टिबाट सबै कुराको थाहा पाए । क्रोधित ऋषिले वसुहरुलाई मनुष्य योनीमा जन्म लिनुपर्ने श्राप दिए । ... बाँकी अंश»
कोरोनाको वन्दोवस्तीमा भ्रष्टाचारको भाइरस प्रवेश !
२०७६ चैत १९ बुधबार, लकडाउनको छैठौ दिन, चैत्र १६ कतिपय कुराले स्मरणीय बन्न पुग्यो । नेपालमा कोरोनाले पहिलो पाइलो टेकेको भन्ने शंकाको बयासियौं दिन हो यो । पहलिो पटक पुस २४ मा यस्तो शंका भएकोमा माघ ९ मा त पुष्टी नै भएको थियो । चैत्र १६ लकडाउनलाई अर्को हप्तासम्म थपिएको दिन पनि हो भने कोरोनाका नाममा ठूलो भ्रष्टाचारको डाउनलोड भएको दिन पनि यही बन्यो । यही दिन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरित एउटा विमानबाट भ्रष्टाचारको पोकै अवतरित भएको पाइयो कोरोना रोकथामका वन्दोवस्ती सामानका साथमा । ... बाँकी अंश»
आउनुस संकटको सबै मिलेर समाधान गरौं
२०७६ चैत १९ बुधबार, देश यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर संकटमा छ । सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ । यो अबस्थामा सरकारले विभिन्न समुदाय र बर्गको लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । ... बाँकी अंश»
लक्ष्मणरेखाको मर्यादा राख्नु भन्दै खुलापत्र
२०७६ चैत १९ बुधबार, आराम छु, तपाईहरुको पनि स्वस्थ जीवन रहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दछु । म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा नै छु, तपाईहरु पनि सुरक्षित रुपमा घरमै बस्नु भएको होला भन्ने आशा गरेको छु । आज पत्रपत्रिका मार्फत, अनलाईन मिडिया मार्फत र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र तपाईहाम्रो सन्देश सम्प्रेषण हुने काम भएको छ । आज यिनै माध्यमले मात्र सम्भव भएको छ भेटघाट र भालाकुसारीका लागि । संसारमा कहिलेकाही यस्ता संकटहरु आइपर्छन् । विश्व मानव सभ्यताको इतिहास देखि अहिले सम्म फर्केर हेर्दा भिन्न स्वरुपबाट मानव माथि संकट आइपरेका छन् । यसले आज नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन । तपाई हाम्रो धार्मिक आस्थाका कारण नेपाल जस्तो पवित्रभूमि देवभुमिमा यस्तो संक्रमण आउदैन र नआओस् भन्ने ध्येय र प्राथना थियो । ... बाँकी अंश»